Eziokwu ahụ bụ na blog laghachiri na ọkwa nkịtị (ruo mgbe Na-ege ntị na Calculator mpụta mbụ) na-egosi m na Digg or Tụrụ Ugwu okporo ụzọ, ezie na-agba ume, ọ bụchaghị okporo ụzọ nke m na-eso. Ndị a bụ ezigbo ndị surfers - na-achọta ọdịnaya dị ụtọ ebe ahụ mana ịlaghachi maka ndị ọzọ. M na-eso ndị folks laghachi - ndị na-akwụ ụgwọ ndepụta m, na-eleta oge niile, ma na-ekere òkè na mkparịta ụka m tinyere ebe a.
Na ọnọdụ mgbasa ozi na-ahụkarị, agara m ahapụ ka mkpọtụ ahụ na-aga n'ihu tupu ịmekpa ya na ọkwa ọhụrụ na isiokwu ọhụrụ. Agaara m anọgide na-anwa 'ịnyagharị ebili ahụ', ikekwe ọbụna na-aga n'ihu mkparịta ụka ahụ gaa na 2 ma ọ bụ 3 ọzọ posts. Ọ bụ ezie na nke ahụ nwere ike nyere aka ịnọgide na-enwe ọnụ ọgụgụ nke (B) nwa oge ndị ọbịa hụrụ m 48 ka 72 awa mgbe post gasịrị, ekpebiri m na m ga-aga n'ihu na-eziga kwa ụbọchị - maka m isi ndị na-agụ (C) ndị na-aga n'ihu na blọgụ m.
Ọ dị mfe ijigide ndị na-agụ ya karịa inweta ndị ọhụrụ. Iwuli na diggwagon ahụ dị ka isi na marathon na-agba ọsọ. Marathon na-ewuli ọgụgụ isi, na-agagharị ma na-ama ụma, na-ezute atụmanya nke ndị debanyere aha gị. Sprint bụ ihe na-agwụ ike na-achọ ịme ndị ọzọ ka ha votu gị, na-ede njikọ njikọta, ma na-anwa ịkọkọ ọnụ ọgụgụ ọhụrụ nke ndị na-agụ nwa oge kwa ụbọchị. I nwere ike ime ya, mana ejighi m n’aka na ị ga-enwe ike ịgba ọsọ ahụ ma ọ bụ na ị gaghị eme.
Tags: Analyticsaghọ aghụghọhackedhullabaloonyocha pinterestpinterest nkwalite